Ulawulo loMgangatho olungqongqo lukhokelela kwiiMveliso eziPhambili-Iindaba-NingBo COFF Machinery Co., ltd
Ulawulo loMgangatho olungqongqo lukhokelela kwiiMveliso eziPhambili
Ixesha: 2021-03-30 I ngxelo: 41
Kutheni abathengi abaninzi bekholelwa kwi-COFF? Nditsho nakwintsebenziswano yokuqala, bakhawuleze bafaka i-odolo kwi-COFF kungenxa yokuba i-COFF inenkonzo elungileyo, kunye nokunxibelelana ngokukhawuleza neendwendwe kunye nokusombulula iingxaki zeendwendwe ngexesha elifanelekileyo. Thetha malunga namhla, olulawulo lweCOFF lomgangatho wemveliso:
Asilawuli nje kuphela umgangatho wezinto ezisetyenzisiweyo ekuthengweni kwezinto ezingekho mgangathweni kwinqanaba lokuqala lemveliso, kodwa sikwaphatha ngokunyanisekileyo ukuhlolwa komgangatho weemveliso ezigqityiweyo kuyo yonke ikhonkco lemveliso, kunye nokuhlolwa komgangatho weemveliso zokugqibela ngokufanelekileyo uthintele uthotho lweengxaki ezibangelwa yile mveliso.
Umfanekiso ongezantsi ukwindawo yokusebenzela, imveliso yethu yokuhlola esemgangathweni ukwenza uhlolo olusemgangathweni lweemveliso ezigqityiweyo, hayi ukuvavanywa kwesampulu, kodwa ukuvavanya ngononophelo imveliso nganye yomthengi, ukuqinisekisa ukuba akukho nto ihamba gwenxa.
Siyathemba ukuba umsebenzi oncomekayo we-COFF, ulwazi olunyanisekileyo lwenkonzo kunye namandla angqongqo olawulo lomgangatho angazisa iimveliso ezilungileyo kubathengi bethu abatsha nabadala. Kwimvula okanye umoya, i-COFF iya kuhlala ilinde wena. Ungathandabuzi ukuqhakamshelana nathi, i-COFF izokuphendula okokuqala kwaye ikunikeze impendulo eyonelisayo.
Previous: UMoya wobugcisa wabantu beCOFF
Okulandelayo: Iinkcukacha Misela uMgangatho